Dawada Ghostwriter Waxaan caawimaad ka helaa qoraaladayda waxbarashadayda
, 15: 40
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah dhanka daawada
Shahaadada caafimaad ee aadka loo raadinayo waxaa diiwaangeliyey lambar nambar. Kuwa ku guuldareysta inay tan sameeyaan waxay kaliya heli karaan boos koorsada iyaga oo sugaya oo xereeya dacwad. Afarta xilli-dugsiyeed ee ugu horreeya - marxaladda hore ee daaweynta ee daraasadda - waxaa ka buuxa maadooyin cilmiyaysan oo teori; weli ma arkaysid bukaanno ku jira heerkan daraasaddan. Imtixaankii horudhaca ahaa ee walbahaarka badnaa - Physikum - wuu dhammaaday. Hadda waxaa imanaya qaybta bukaan socodka oo leh maadooyin kala duwan: daawada gudaha, Qalliinka, shucaaca, caafimaadka carruurta, maqaarka, ENT, indhaha, iwm. Ka dibna mar kale iyo mar labaad imtixaanno qoran oo si isku mid ah u qaabeysan loona qiimeeyo iyadoo la adeegsanayo barnaamijyada tirakoobka. Waxaas oo dhami waxay ka dhigan yihiin culeys fara badan iyo waqti yar oo mowduucyada kale ee koorsada ah. Intaas waxaa sii dheer, shaqada wax ku oolka ah ee isbitaalka ka badan mashquul badan. Waan kaa caawin karnaa inaad yareyso culeyska. Kaliya nala soo xiriir annaga, tusaale ahaan emayl. Fadlan weydiiso mid bilaash ah dib u xusuusasho waqti adiga kugu habboon. Waxaan si toos ah u qaadan doonaa Kontakt kula soo xiriiro oo aan daryeelo dalabkaaga. Sidoo kale waa lagusoo dhaweynayaa inaad si toos ah u dalbato shaqadaada si aan u bilaabi karno qorista shaqadaada isla markiiba. Tan macnaheedu waxa weeye in laguu xilsaari doono maareeye kaas oo kula socon doona shaqadaada isla markaana si toos ah adiga kuugu toos ah xiriirka adeegtaa. Qorayaashayagu waxay qoraan shaqadaada.
Waxbarashadaada waxaad ku haysataa dhowr dhibaatooyin oo ay tahay inaad xalliso. Waxaa jira imtixaano aad u adag oo kugu qaadan doona waqti badan. Dhowr qaybood ayaa halkan lagu xusay tusaale ahaan, kuwaas oo ay tahay inaad ku qorto warqad waqti aad u gaaban:
Cudurka oo ah tusaale cudur ah
Qeybahaan adag waxaad u baahan tahay dhowr bilood oo ah waqti isku diyaarin oo urursan. Isla sidaas ayaa lagu dabaqayaa qoraallada sayniska. Shaqada tacliimeed waa inaad la xiriirtaa wakaaladeena ghostwriter. Waa inaad ku qortaa warqadaada waxbarasho. Qoraa-yaqaankeenna ghostwriter-ka waxaa badanaa lagala tashadaa qormooyinka tacliinta. Abuuritaanka a Shaqada guriga waa wax ay tahay inaad ka tanaasusho Ha ahaato shahaadada mastarka ama kan bachelor-ka.
Qoraalka cirfiidka ee dawada guud
Qoraal-gacmeedka loo yaqaan 'Ghostwriting' waxaa adeegsada ardayda caafimaadka inta ay waxbarashadooda ku jiraan si ay uga caawiyaan Gudbinta gasho maadadaada. Qorayaashayada ruug-caddaaga ahi waxay horey u dhammaystireen waxbarashadoodii caafimaadka waxayna leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan oo dhinaca caafimaadka ah. Khibraddan kuma qabsan kartid muddo gaaban. Aqoontaan adigu iska dhig. Waxaa si caqli-gal ah nalaga caawin doonaa diyaarinta qoraalka.
Qorayaashayada ruug-caddaaga ah ee ku takhasusay cilmiga caafimaadka waxay leeyihiin sannado badan oo waayo-aragnimo ah adigana Qoraalka PhD Horey ayaa loogu dhammeeyey dhinacyo kala duwan oo caafimaad, sida cilmu-nafsiga. Waaxda cilmu-nafsiga ee cilmu-nafsiga ayaa aad ugu riyaaqeysa guud ahaan macnaha guud ee daawada. Maaddooyin kale oo badan ayaa isugu yimaad takhasuskan. Cilmi-baaris aasaasi ah oo ku saabsan hiddo-wadaha (genetics) waxay ku yeelan kartaa cawaaqib-ballaadhan gaadhitaanka habab-daaweyn oo cusub
Tababbarka caafimaadka inta lagu jiro barashadaada waa daal ku filan. Waad ku ilaalin kartaa xorriyaddaada shakhsi ahaaneed adoo u gudbinaya sayniska, shaqada caafimaadka sida qoraalkaaga takhasuska ah ee ghostwriters. Qoraal-gacmeedku wuxuu xallin doonaa shaqadaada aqooneed si taxaddar leh. Waxaad timid meeshii saxda ahayd adoo adeegsanaya qoraaladeenna jilicsan.
Daawada beerta neoplasia ama onocology
Oncology waa qayb ka mid ah daawada oo hadda aad iyo aad ugu sii badan baahida loo qabo dhakhaatiirta soo koraya. Tani waa sababta ay cudurada neoplastic-ku u kordheen sanadihii la soo dhaafay. Waad baari kartaa sababta dhabta ah. Nala soo xiriir, waan ku caawin doonnaa! Adeegsiga noocan oo kale ah waxay xaqiijineysaa tayada shaqadaada.
Daawada qaybta ganacsiga
Haddii aad si guul leh u dhammaysato shahaadada caafimaadka, waxaad haysataa fursado badan oo aad ugu gudbin karto aqoontaada: Waad sameyn kartaa tababar. Waxaad si fudud usii wadi kartaa shaqada cisbitaalka. Waxa kale oo aad mari kartaa wadada sayniska. Waxa kale oo aad fursad u leedahay inaad hesho shaqo buuxisa baahiyahaaga shirkadaha ganacsiga, warshadaha dawooyinka ama guud ahaan warshadaha. Markaa waxaad ku guuleysan lahayd xorriyaddaada dhaqaale xaalad kasta ha noqotee. Tani waa inay ku siiso adiga Aidis mudan.
Hubinta tayada ee dhanka daawada